अख्तियारमा मामा सचिव भएको १५ महिनामै ५०औं रोपनी जग्गा जोड्ने शक्तिशाली भान्जा | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more अख्तियारमा मामा सचिव भएको १५ महिनामै ५०औं रोपनी जग्गा जोड्ने शक्तिशाली भान्जा
फागुन २० गते, २०७७ - ०९:०९
काठमाडौं । पछिल्लो समय गृह मन्त्रालयको प्रशासानिक नेतृत्व अत्यन्तै कमजोर बनेको टिप्पणी प्रहरी तथा कर्मचारी वृत्तमा व्याप्त छ । मन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ को स्वभाव टन्न खाएर उघ्राउँदै बसेको भैंसीको जस्तो, सचिव महेश्वर न्यैपानेको ध्यान उठ्तीपुठ्तीमा मात्र भएपछि गृह प्रशासन लथालिंग बनेको हो ।
आजको बुधवार साप्ताहिकमा खबर छ – गृहलाई पनि अप्रत्यक्ष रूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै चलाउने गरेको छ । बालुवाटारको राजनीतिक नेतृत्वका अगाडि गृहको प्रशासानिक नेतृत्व लम्पसार परेको छ । जसका कारण दुई–दुई महिनामा सीडीओ हेरफेर भएका छन् । जसको प्रत्यक्ष असर जिल्लाको शान्ति सुरक्षामा परेको छ । सचिव न्यौपानेको कारण गृह प्रशासन पछिल्ले समय झन्झन् बदनाम बन्दै गएको छ ।
मामाको आडमा भान्जा पौडेलले तर्साउँदै घुस असुल्ने र पक्राउ गरिएकाहरूसँग पनि भनेजति रकम दिए बयान कमजोर दिएर विशेष अदालतबाट मुद्दा जिताइदिने भनी मोलमोलाइ गर्दै आएका स्रोतले बतायो । मामा न्यौपाने अख्तियारमा सचिव हुँदा भान्जा सुजनले के–के गरे ? यसबारे यसअघि नै बुधबार साप्ताहिकले तथ्यसहित सामग्री प्रकाशन गरिसकेको छ । केही तथ्य यस्ता छन् ।
घटना नम्बर १ : २०७५ वैशाख १९ मा नापी कार्यालय साँखु काठमाडौंका प्रमुख नापी अधिकृत भागवत साहलाई अख्तियार अनुसन्धान दुरुपयोग आयोगले पक्राउ ग¥यो । गोकणेश्वर नगरपालिका–२ स्थित नयाँपाटीमा रहेको ३६ रोपनी जग्गा कित्ताकाट गरिदिएबापत सेवाग्राहीसँग कार्यालय सहयोगी खेमराज भण्डारीमार्फत २ लाख ५० हजार लिएको भन्दै साहलाई कार्यालय परिसरबाट पक्राउ गरिएको थियो ।
त्यो ३६ रोपनी जग्गा कित्ताकाट गरी २ लाख ५० हजार घुस दिने सेवाग्राही थिए, काठमाडांै जिल्ला गोकर्णेश्वर नगरपालिका ३ बस्ने सुजन पौडेल । त्यो ३६ रोपनी जग्गा पनि उनकै थियो । अख्यिारकै विज्ञप्तिका अनुसार साह आफैंले घुस लिएका थिएनन् । कार्यालय सहयोगी भण्डारीमार्फत लिन खोजेका थिए । रंगेहात घुस लिँदा लिने व्यक्तिलाई पक्राउ गरिन्छ । करिब दिउँसोको २ बजेको थियो साह कार्यालयमै थिए । कार्यालयको ढोकामा रहेका भण्डारीलाई पौडेलले पैसा हातमा लगाइदिएपछि साहलाई तत्काल पक्राउ गरिएको थियो ।
घटना नम्बर २ : २०७५ असोज २१ मा महानगरीय प्रहरी वृत्त, बौद्ध काठमाडौंका प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) श्यामकुमार राईलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पक्राउ ग¥यो । सेवाग्राहीबाट सोनी कम्पनीको टिभी खरिदबापत १ लाख ४० हजार घुस लिएको अरोपमा राईलाई पक्राउ गरियो । अहिले राईले सफाइ पाइसकेका छन् ।
सुजनको परिवार यसअघि सामान्य परिवारको भएको उनका छिमेकीहरूलाई थाहा छ । सुजन पौडेलका बुबा, अख्तियार सचिव न्यौपानेका भिनाजु पुस्कलराज पौडेल जजमानी पेसा गर्ने पुरोहित हुन् । यसबाहेक उनको परिवारमा कोही पनि रोजगारीमा छैनन् । तर गएको तीन वर्षमा छोरा सुजन पौडेलले भने अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेका छन् । काठमाडौंको साँखु क्षेत्रमा मात्रै उनको करोडौं मूल्य बराबरको जग्गा रहेको छ । मामा अख्तियारमा सचिव भएको अवधिमा मात्रै उनले करोडौंको जग्गा जमिन खरिद गरेको मालपोत कार्यालयको अभिलेखबाट खुलेको छ ।
त्यसैगरी २०७५ जेठ १ मा साबिक नाङ्लेभारेको कि.नं. ११०, नक्सा सिट नं. ३, ३ ख को जग्गा खरिद गरेको देखिन्छ । नाङ्लेभारेकै साबिक कि.नं. ११३ पनि सोही दिन खरिद गरेका छन् । सुजन पौडेलले नाङ्लेभारेको कि.नं. ११६ पनि किनेका छन् । यीबाहेक अन्यत्र पनि उनको नाममा धेरै जग्गा जमिन रहेको स्रोतको दाबी छ । भक्तपुर साबिक चित्तपोल गाविसमा १ रोपनी १५ आना जग्गा उनको नाममा देखिन्छ । पछिल्लो समयमा उनी गृह सचिवको भान्जाको तुजुक देखाउँदै उनी प्रहरीका हाकिमहरूसँग बाक्लो हिमचिम र उठबस सक्रिय छन् ।
फागुन २० गते, २०७७ - ०९:०९ मा प्रकाशित